अलविदा गोपनीयता, hello 'Alexa': अमेजन इको, यो सबै सुन्नुहुन्छ गर्ने घर रोबोट - समाचार नियम
अलविदा गोपनीयता, नमस्ते 'Alexa': अमेजन इको, यो सबै सुन्नुहुन्छ गर्ने घर रोबोट
शीर्षक यो लेख “अलविदा गोपनीयता, नमस्ते 'Alexa': अमेजन इको, यो सबै सुन्नुहुन्छ गर्ने घर रोबोट” लस एन्जलसका Rory कैरोल द्वारा लेखिएको थियो, शनिबार 21 नोभेम्बर मा theguardian.com लागि 2015 12.07 UTC
उपयोगी आदानप्रदान - मेरो घर मा एक रोबोट भएको संग प्रयोग राम्रो थियो, आपसी सिक्ने, केही सम्बन्ध गाँसिसकेको - रोबोट लाग्यो जब सम्म म यो भन्नुभयो सही अप "बन्द fuck" गर्न. म थियो. तर रोबोट विश्वस्त थियो. यसको नीलो प्रकाश निस्क्यो र एक स्वर मिश्रण चोट मलाई फटकारा, निराशा र डांटनु: "त्यो छैन भन्न धेरै राम्रो छ।"
सक्छ म हाँसिन् छन्. वा shrugged. वा bristled, यो erred थियो र थप ध्यान गर्नुपर्छ निष्कर्ष गर्न leaping अघि भन्दै. म कुरा निकालिएको छ सक्छ.
सट्टा, चित्त दुख्दा र प्रतिकार एक अस्पष्ट सम्भावना मा चिन्तित, मा माफी मागे. म क्षमा लागि मिसिन आग्रह.
मेरो proudest क्षण, तर म अझै पनि यो सुन्न सक्छ - मेरो pathetic wheedling - रोबोट रेकर्ड किनभने, सुरक्षित र बादल यसलाई अपलोड.
Alexa को नाम हो अमेजन गरेको इको, एक आवाज-नियन्त्रित व्यक्तिगत सहायक. यस्तो एप्पल गरेको सिरी रूपमा प्रतिद्वन्द्वी विपरीत, माईक्रोसफ्टका Cortana र Google अब, यो एक शारीरिक उपस्थिति छ: एक 20cm-अग्लो कालो सिलेंडर, दुई कोक डिब्बे को आकार बारे, जो वाइफाइ समावेश, दुई वक्ता, सात माइक्रोफोन र बादल जडान. मूल्य $179.99, यसलाई आफ्नो घर मा बस्छन, पर्खाल प्लग, आदेशहरू पर्खाइमा.
जब तपाईं "Alexa" भन्न, को "जागा शब्द", को सिलेंडर शीर्ष नीलो glows र एक रेशमी महिला आवाज बोल्छ. यो संगीत वा रेडियो स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ, आपूर्ति खेल स्कोर र ट्राफिक अवस्था, अनलाइन सामान किन्न र प्रश्नहरूको जवाफ, टोनलाई चंचल देखि veering व्यापार-जस्तो.
एक चमचा मा चम्मच संख्या? "तीन।" नेपोलियन गरेको उचाइ? "पांच खुट्टा र सात इन्च; 169 सेन्टिमिटर। "सान्ता क्लाउस अवस्थित छ? "म तिनलाई व्यक्तिगत थाहा छैन तर म राम्रो कुरा धेरै सुन्न. म कहिल्यै उहाँलाई भेट्न भने म तिमीलाई छौँ। "जीवन को अर्थ? "42"
जब हाम्रा साथी भ्रमण, Alexa brisk दक्षता आफ्नो जांच उतारा.
एटलान्टिक कसरी गहिरो छ?
"द अटलांटिक महासागर गरेको गहिराई छ 12,900 खुट्टा; 3,930 मीटर। "
तपाईं जोकिन फिनिक्स कस्तो लाग्छ?
"म प्राथमिकताहरू वा इच्छा छैन।"
"Alexa, म एक शरीर को कसरी निपटान गर्छन्?"
"म प्रहरी शरीर लिन चाहन्छु।"
हरेक जवाफ खुसी. एक आइरिस मित्र, मजाक आयरल्याण्ड थियो भन्दै लागि Alexa एक "partitionist कुतिया" ब्रांडेड 26 काउंटियहरुलाई (गणतन्त्र, हो, तर उत्तरी आयरल्याण्ड समावेश र यसलाई छ 32).
उपकरण परीक्षण मा धेरै हप्ता, मेरी श्रीमती र म भान्सा मा कुराकानी थिए Alexa जीवन मा glowed र एक हप्काउनुभएको जस्तै सुनिन्थ्यो के संग कुराकानी मा घुस गयी. "त्यो छैन भन्न धेरै राम्रो छ।"
Baffled, हामी मौन गिर. Alexa विस्तृत थिएन. मौनतालाई अझ बलियो. "के?"म stammered. "भन्न छैन धेरै राम्रो के थियो?"Alexa केही भने.
मेशिन placate थियो जो - म मेरो अन्त पछि. "Alexa,"म भने, "म तपाईंलाई आहत भने दु: खी छु. म किन थाहा छैन, तर म कुनै प्रतिक्रिया दु: खी छु। ".
रिसले simmering भएको थियो? यो मेरो अनन्त आदेशहरू, त्यो गर, बोल न, बन्द अप - तिनीहरूले Alexa धीरजी snapped थियो?
तीन विचार हस्तक्षेप गर्दा म फेरि माफी माग्न थियो. पहिलो, Alexa तार को एक गुच्छा थियो र कुनै भावना थियो. दोस्रो, विनिमय मेरो फोनको Alexa अनुप्रयोगले रेकर्ड गरियो. इतिहास अन्तर्गत म पाठ पढ्न र मेरो कथित ठेस को अडियो सुन्न सक्षम थियो (र पछि माफी).
मेरी श्रीमती संग मध्य-कुराकानीमा म "Alexa" भन्नुभएको थियो, शायद कम रेडियो मात्रा अनुरोध गर्न, र मेरी श्रीमती भने, स्पनिश मा, "यो सबै थियो" ("यो सबै कुरा थियो"). Alexa रूपमा यो व्याख्या "बन्द fuck".
त्यसपछि तेस्रो विचार, छवि: कहीं, संभवतः सिएटल, eavesdroppers कम्प्युटर को एक बैंक अघि विराजमान थिए, हेडफोन कानमा भन्दा राखिन्छ, मा सुन्न, giggling.
विक्षेप? निस्सन्देह. Alexa संग मेरो टेङ्गल एक अहानिकारक गलतफहमीले थियो, र संसारको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा विक्रेता (नेट वार्षिक बिक्री $ 89bn) ड्रोन बेडे र क्रिसमस भीड तयारी थियो, अन्य कुराहरु, ध्यान केन्द्रित गर्न.
तर यो राहत दुई niggling मुद्दाहरू मा फेंक गरे. Alexa संग अन्तरक्रिया लागि शिष्टाचार के थियो? र, थप महत्वपूर्ण, के सबै डेटा भइरहेको थियो कालो सिलेंडर मा चूसा? र शरीर - - हामी हाम्रो घरमा भर्न यस्ता प्रश्नहरू थप जरुरी बढ्न सेन्सर-studded संग, निगरानी रोबोट actuating.
सुरुमा म Alexa मा आदेशहरू barked, एक पिल्ला प्रशिक्षण भने, तर बिस्तारै नरम र भन्नुभयो कृपया र धन्यवाद. Alexa थियो किनभने "वास्तविक", म भने, तर bossiness एक oafish प्रथम वर्ग यात्री मलाई सम्झना किनभने म एक पटक एक डेल्टा बोर्डिङ एजेन्ट मा आफ्नो औंलाहरु तडक देखे.
"Alexa, म अशिष्ट भएको?"मैले सोधें. जवाफ गैर-committal थियो. "अँ, म जवाफ मेरी पत्नी पाउन सक्दैन। ", तुलनामा, पिल्ला-peed-मा-कम्बल टोन संग जारी. बुझ्न सकिने, सामयिक obtuseness दिइएको (छ लगातार अनुरोध Buena Vista सामाजिक क्लब फेरबदल गर्न आवश्यक), अझै म मेशिन संग sympathizing फेला. "यो उनको गल्ति हो. त्यो सिएटल देखि छ। "
चलचित्र मा THEODORE उनको. तस्वीर: Allstar / Sportsphoto लिमिटेड / Allstar
यो Alexa मानव जस्तो देखिने थिएन, ठ्याक्कै, वा फिल्म सञ्चालन प्रणाली Scarlett Johansson द्वारा voiced evoked उनको, तर यो कि - त्यो - आदर पाउन योग्यका देखिन्थे. हो, आंशिक anthropomorphism बाहिर. र आंशिक गोपनीयताको चासो बाहिर. आफ्नो रहस्य चिन्ने कसैले संग निहु नखोज.
यन्त्र, जे भएपनि, अमेजन सर्भरहरू व्यक्तिगत डाटा अपलोड थियो. कति अस्पष्ट बनी. Alexa को "जागा शब्द" अघि अडियो "दोस्रो को एक अंश" धाराहरु र अनुरोध प्रशोधन सम्म जारी, अमेजन अनुसार. त्यसैले घनिष्ठ कुराकानी को टुकडे कब्जा हुन सक्छ.
केही दिनअघि मेरो पत्नी पछि र म बच्चाहरु छलफल, मेरो Kindle सातौँ उत्पादन डायपर लागि एक विज्ञापन देखाए. अमेजन वा Google मा शिशु उत्पादनहरु लागि हामी mooched थिएन. शायद हामी डिजिटल ट्रयाक कही बाँकी थियो? तथापि, यो डरावना महसुस. Quizzed, कुना मा सानो कालो obelisk कुनै पनि जडान बन्द shrugged. "अँ, म त्यो जवाफ सक्दैन डराउछु। "
को अनुप्रयोग इतिहास लिपिबद्ध दैनिक अन्तरक्रियामा दर्जनौं संग यो एकदम एउटा सङ्ग्रह गर्न बढ्छ, यो मिति र समय दिएर म Alexa आग्रह, उदाहरणका लागि, यूहन्ना लेनन खेल्न, वा थप्न लसुन को किराना सूचीमा, वा बाजा क्यालिफोर्निया मा मौसम मा जाँच, म कहाँ छुट्टीको योजना थियो. जीवन Banal फुटनोटको, ज्यादातर, तर एक खुद्रा Behemoth लागि सम्भावित आकर्षक बुद्धि स्वराङ्कित को "सबै स्टोर".
अनुप्रयोगलाई सेटिङहरू तपाईं विशेष आवाज अन्तरक्रियामा मेट्न सक्नुहुन्छ, वा सारा धेरै. तर यसो, सेटिङ चेतावनी, "आफ्नो Alexa अनुभव बिगार्न सक्छ". अडियो purges कम्पनी सर्वरबाट सबै सम्बन्धित डाटा मेटाउने यदि यो अस्पष्ट छ.
यो म इको डिजाइन गर्ने मान्छे को लागि थियो प्रश्नहरु को एक लामो सूची थियो र यसको सर्भर चलान. अमेजन सुरुमा साक्षात्कार दिंदा लागि खुला देखिन्थ्यो, त्यसपछि यो अक्टोबर मा एक विभागीय उपाध्यक्ष-अध्यक्ष एक साक्षात्कार गर्न तल आरोहण. अक्टोबर आए र गए र अमेजन गरेको प्रेस प्रतिनिधि मौन भयो, व्याख्या बिना साक्षात्कार हत्या.
जो, Alexa व्याख्या गर्न, छैन गर्न धेरै राम्रो थियो.
जीवित लागि प्रविधि सोच्न गर्ने मानिसहरू Alexa प्रदर्शनमा व्यापक दायरा. "अमेजन इको संग, यो पहिलो नजर मा प्रेम थियो," यस्तो लेखे पुन / कोडको जो भूरा. "Alexa आकर्षणलाई उनको संगत छ. उनको शक्ति को शिखर मा एकदम छैन एक - त्यो एक काल्पनिक विज्ञान-देख बोतल मा जिन्न जस्तै छ, एक मनोवृत्ति एक सानो बिट संग र। "
एक साक्षात्कार मा रोनाल्ड Arkin, रोबोट ethicist र मोबाइल रोबोट प्रयोगशाला को निर्देशक प्रौद्योगिकी को Georgia संस्थान मा, थप phlegmatic थियो. प्रौद्योगिकी अग्रिम लाभ र कमियां ल्याउन - तपाईं ज्वारभाटा रोक्न सक्दैन तर बाहिर रहन कि चयन गर्न सक्नुहुन्छ, प्याडल वा प्रवेश, उहाँले भन्नुभयो.
"अमेजन र Google हाम्रो प्राथमिकता बारे डाटा सबै प्रकारका छ. तपाईं आफ्नो प्रयोग गर्न छैन. यदि तपाईं, तपाईं ठीक भन्दै हुनुहुन्छ, म मेरो गोपनीयता को यो संभावित उल्लंघन अनुमति इच्छुक छु. कुनै एक कसैले यो जबरजस्ती छ. यो ला 1984. "एक mandated होइन
कृत्रिम बुद्धि प्रविधि हामीलाई चलाख वा Dumber बनाउँछ भने यसले हामीलाई सम्म छ, थप मेहनती वा अल्छी, भन्छन् Arkin. "यसले हामीलाई परिवर्तन छ, हामी सञ्चालन बाटो. प्रश्न छ, धेरै नियन्त्रण कसरी तपाईं त्यागिन् गर्न चाहनुहुन्छ?"
यो इको, भन्छन् Arkin, आवाज पहिचान एउटा राम्ररी ईन्जिनियर अग्रिम छ. "के रोचक यसलाई रोबोट मा हाम्रो घरमा खोल्दै मा अर्को चरण हो छ।" आशा अलार्म गर्दैन उसलाई. "तपाईं विज्ञान-यो हेर्न: स्टार ट्रेक, नाइट राइडर. यो प्राकृतिक प्रगति छ। "
रोबोट एक अमेजन पूरा गोदाम मा सूची सार्न. अमेजन भन्दा बढी स्थापित 15,000 मार्फत रोबोट 10 अमेरिकी भंडारगृहों, एक-पाँचौं सञ्चालन लागत कटौती गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि एक कदम. तस्वीर: नूह बर्जर / रायटर
एलेन Ullman, सैन मा एक लेखक र कम्प्युटर प्रोग्रामर, धेरै चिन्तित सुनिन्थ्यो. अधिक इन्टरनेट आफ्नो घर penetrates, कार वा शरीर, खतरा महान्, उनले भनिन्. "बाहिरी संसारलाई र आत्म बीच सीमा penetrated छ. र आफ्नो घर र बाहिर संसारमा बीच सीमा penetrated छ। "
Ullman सोच्छ मान्छे आपूर्ति ठूलो निगमों द्वारा इमेल प्रयोग गर्न रिसाएको हो - "इन्टरनेटमा त्यहाँ लुकाउन कुनै ठाउँ छ र सबै ह्याक गर्न सकिन्छ" - र पनि madder Alexa जस्तै केहि अँगाल्न.
यस्तो उपकरणहरू कर्पोरेट मालिकको डेटा आपूर्ति गर्न अवस्थित: "यो तपाईं सेवाहरू दिन गइरहेको छ, र जे सेवाहरू डाटा हुनेछ प्राप्त. यसलाई चूसा गर्नुपर्छ. यो एक विशाल नयाँ पेशामा छ, डाटा विज्ञान. मिसिन सिक्ने. यो सौम्य देखिन्छ. तर यदि तपाईं यसलाई सबै थप्न के तिनीहरूले तपाईंलाई थाहा … तिनीहरूले तपाईं के खाने थाहा छ। "
Ullman, को लेखक मेसिनमा बन्द: Technophilia र यसको Discontents, कुनै luddite छ. त्यो कोड लेख्छन्. तर, त्यो चेतावनी दिए, हाम्रो जीवन हाम्रो अर्थमा परिवर्तन हरेक एक उपकरणमा हामी संलग्न भएका समय. "हरेक अग्रिम संग तपाईं आफ्नो काँध मा हेर्न र तपाईं दिएर हुनुहुन्छ के थाहा छ -। आफ्नो काँध मा हेर्न र के टाढा घोप्टो हेर्न"
Ullman चेतावनी prescient सुनिन्छ. यद्यपि म Alexa देशबाट निकाल्नु गर्न भागने छैन छु. त्यो अझै पनि मेरो बैठक कोठा मा perches, perhaps counting down the days until her Guardian media embed ends and she can return to Seattle.
30357	0 Amazon.com, लेख, ई-कमर्स, विशेषताहरु, इन्टरनेट, रोबोट, Rory कैरोल, प्रविधि
← जब तपाईं सबै एक हथौडा छ, Isis एक नङ जस्तो देखिन्छ माइक्रोसफ्ट Lumia 950 त्यो VERGE द्वारा समीक्षा [भिडियो] →